Flat Spring ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Flat Spring မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
Tong Na Enterprise Co., Ltd. ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Flat Springစက်ရုံ, အလုပ်ရုံ, တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ နှစ်အတော်ကြာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူငါတို့သည်ကိုယ်စက်ရုံတွင်ထားရှိခြင်း, ထိုသို့ထုတ်လုပ်အထူးပြုနေကြတယ်, ကျနော်တို့စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကြီးမားသောအမိန့်ကိုကြိုဆိုသည်။ သင့်ကိုငါတို့နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါအခမဲ့ခံစားကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တို့နှင့်အတူစကားပြောရွှင်လန်းခြင်းရှိချင်ပါတယ်။
Flat Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထုတ်ကုန်,ရှည်လျားသောသမိုင်းနှင့်အတူ,အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာများ ကျွမ်းကျင်သည်။.၎င်းသည် ထိုင်ဝမ်ရှိ အဓိက OEM စက်ရုံများသို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။,နောက်ပိုင်းတွင် အခြားဒေသများရှိ အဓိက မော်တော်ကား OEM စက်ရုံများသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။.
GSC46-1 Volute Spring,၃.3*9.7mm Car Seat Adjuster Used Spring,Saponification လုပ်ငန်းစဉ် Coating ကုသမှု
ပထမဆုံး ပို့ဆောင်မှုအတွက် ကောက်ခံငွေ
နှစ် 40 ကျော်အတွေ့အကြုံ,crimping မှဖွဲ့စည်းရန်,လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။,နှင့်နမူနာစမ်းသပ်မှုရနိုင်သည်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/flat-spring.html
အကောင်းဆုံး Flat Spring ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Flat Spring မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Volute Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ကနဦးထုတ်လုပ်မှု,ရှည်လျားသောသမိုင်း,နှစ် 40 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းပညာ,အဓိက ပြည်တွင်း OEM ကားထုတ်လုပ်သူများထံ ထောက်ပံ့ပေးသည်။,နောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများထံ စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။. 3821 Volute Spring,၁၀*3mm ကားထိုင်ခုံထောင့်ချိန်ညှိစပရိန်,ဆန့်ကျင်သည်။-သံချေးဆီ ထိုင်ဝမ်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ပို့ဆောင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ကြွက်တက်ခြင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်းအထိ,လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။,နှင့် စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာများကို ပေးနိုင်ပါသည်။,ဖောက်သည်များသည် နမူနာ သို့မဟုတ် ပုံများကို ပေးနိုင်ပါသည်။,နှင့် Tong Na တို့သည် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်အရ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ Material China Steel ထိုင်ဝမ် TS16949 နှင့် ISO90001 လက်မှတ်